စိတ်ပြောင်းမှ အိတ်ဖောင်းမည် Mindset | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » စိတ်ပြောင်းမှ အိတ်ဖောင်းမည် Mindset
စိတ်ပြောင်းမှ အိတ်ဖောင်းမည် Mindset
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 13, 2015 in Opinions & Discussion | 11 comments
ဒီချုပ် ရွေးဂေါက်ပွဲ ဝင်မည်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါပီ.. ဗွားဒေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ ရှင်းပြနေစရာမလို။ အံ့ဩစရာတော့ မရှိ၊ အခြားလည်း ဘာမှ မလုပ်တတ်လေ…။ ဒီတော့ဝင်ရမှာပေါ့…။ မဲစာရင်း ဒီလောက်မှားတဲ့ကြားက ဒီချုပ် နိုင်မလား..။ နိုင်ပါမည်.. ၁၉၉၀ တုံးကလို တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ပါဦးမည်။ မဲစာရင်းတော့ ပြင်ပေးရမှာပေါ့…။ ခြေအုကို မပြင်လို စစ်တပ်နဲ့ဘပြောင်ဖွတ်အစိုးမရ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အန်အယ်လ်ဒီသာ တခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် တွန်းပို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားစေတယ်။ အားလုံးကို စုစည်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ အများထင်သလို အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ သပ်ချောင်ပါတီတွေအကြား မဲပြန့်မှု ရှိမည်မဟုတ်တော့ ။ တိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေ မဟာမိတ်ဖွဲမှု၊ မဲစောင့်ကြည့်မှုကိုသာ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်လျင် လွှတ်တော်တွင် ဒီမိုရာနှုန်းပြည့် ကြီးစိုးမည်။
ခြေဥပြောင်းဖို့ရော… ဒါတော့ မလွယ်…။ ဘာလို့လည်း… ဗွားဒေါ်ဆိတ်ကို သိနေလို့။ ဒီချုပ်သည် ဗွားဒေါ်မလှုပ်လျင် ကျောက်ရုပ်။ ဗွားဒေါ်ဆိတ်ကိုလည်း သာမန်လူတောင် ခန့်မှန်းလို့ရလျင် စစ်တပ်တတပ်လုံး ကျွန်ပြု ထားနိုင်တဲ့ အူးသမ်းရွှေနဲ့ အပေါင်းအပါများ ပိုသိတယ်။ ဒီချုပ်ခြေလှမ်းကို ဗွားဒေါ်ဆိတ် နားလည်လျင် ကြိုတွက်နိုင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် သူရွှေ့မည့်အကွက် သိဖို့ မခဲယဉ်း။ သူ့အကြောင်း လုံးစုံပတ်စေ့ လေ့လာထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ဇုတ်များအဖို့ အခြေအနေကို ထိန်းနိုင်လျင် ဘယ်အကွက်ရွှေ့ရွှေ့ သူတို့ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာသာ။ မျှော်လင့်သလို မဖြစ်တာနဲ့ ဖြစ်တာပဲ ရှိမည်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၂၀၁၀ – ၂၀၁၅ ငါးနှစ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ မဟုတ်လား။
ဒီချုပ် အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံကို မပြောင်းနိုင်လျင် ဘာမျှ မထူး.. သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း။ ဗွားဒေါ်ကို ဝေဖန်ရဲသူ၊ စိမ်ခေါ်နိုင်သူ ပါတီတွင်း ပါတီပ အများလာဘ်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ထဲ မပေါ်သ၍ ခေတ်ပြောင်းနိုင်မည် မဟုတ်။ တဆိတ်ထဲ ခေါင်းဆောင်မှုထက် သုံးလေးငါးဆိတ် ပုံစံသစ် သွားနိုင်မှ တိုက်ပွဲအနေအထား ပြောင်းမည်၊ မျှော်လင့်ချက် ရှိလာမည်။ ညီတူမျှတူ ဦးဆောင်ရမည် မဆိုလို။ စစ်တပ်တွင်းလဲ အဲလို မရှိ။ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အူးသမ်းရွှေ ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ သို့သော်အဆင့်နိမ့် မဟာဗျူ ဟာပိုင်းအထိ မျက်နှာလွှဲလို့ရမည့် ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ထားသည်။ ဒီချုပ်မှာ ရှိပြီလား..။
လာဘ်ရှိ အနေအထားနဲ့တော့အဲလိုပုဂ္ဂိုလ် မမြင်..။ မွေးထုတ်ပေးသည့် စကားလုံးအား သတိပြု စေလိုသည်။ ကာလံ၊ ဒေသံ၊ ပယောဂံ… ပယောဂံ၏ ဖန်တီးပြုလုပ်စီမံချက် များစွာ တာသွားသည်။ စစ်တပ်လို အာဏာရှင် ဆန်မရ၍ တွန်းတင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်။ ဥပမာ ဖွတ်ပါတီကိုကြည့်။ ခေါင်းဆောင်များစွာ ရှိသည် သို့သော်ပါတီအပေါ် တကယ်ဩဇာ လွှမ်းပါ၏လော။ အာဏာ၊ ငွေ မရှိလျင် လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ပါတီတွင်းပင် မြောင်းထဲရောက်မည်။ အန်အယ်လ်ဒီက လူထုအခြေပြု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ…။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလျင် လုပ်ရဲသူ၊ အရည်အခြင်းရှိသူများ ပေါ်လာမည်။ မျက်နှာသစ်များနှင့်အတူ အတွေးအမြင်သစ်များ ဆောင်ကျဉ်းလာမည်။ မတူညီမှုများနှင့်အတူ တိုးတက်မှု ဖြစ်ထွန်းလာမည်။ရွေးဂေါက်ပွဲ နိုင်ပြီး ခေတ်ပြောင်းဖို့ အရေးကြီးသည် မဟုတ်လော..။
ကာယကံရှင် ဗွားဒေါ်ဂျီးမှ နားလည်မှု ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းယုန်မှ တဗါး….။
ပျတနာကို နျူဒတ်​​ပေါင်းဖို​ဆောက်​ပီး ရှာပြန်​ဘီ
mbt ဂယော ယွေးဂေါက်ပွယ်ဝန်မှါလားးး
ဒေါ်စု၏စိတ်ကို.. ကြိုမမြင်နိုင်သူများမှာ.. ရှစ်ပြူး.( ရှစ်ပူးမဟုတ်) ရှစ်လေးလုံးအကြောင်းပြု.. ပြူးထွက်နေသူများသာရှိသည်..။
ဆိုတော့.. အာ့ ကြောင့်ဂို တမင်စောင်းတုတ်တာ…. မခံနိုင်ဝူး ကြောင့်ဘက်က … ကွကိုယ်ခံ
ကြောင်တောင် အသံပြောင်းသွားသလားလို့ ထင်မိတယ်။
ဗွားဒေါ်ကို ဦးဝင်းတင်လို ဝေဖန်ရဲသူရှိစေချင်ရင် အမောင်ကြောင် ရောက်ရာအရပ်က အမြီးမတန်းပဲ (ရှိနေတဲ့အမြီးဖြတ်ပစ်ပြီး) အမြန်ဆုံးသာ ပျံလာဗာဒေ့ါ…………
မနေ့က MRTV မှ မဲပေးစနစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးမည့်အကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်ပြီ။
ယခုအခါ ကတော့ ထူးဆန်းအံသြဘွယ် အတိပင်။ ဗိုလ်တင်အေး နဖူးပေါ်လက်တင်ကာ ညစဉ် ညဏ်နီ ညဏ်နက် မျိူးစုံ ထုတ်ရာမှ ပေါ်လာသည့် အကြံပေလော။ သူသာ သိပေမည်။
ယခုကား မဲဆန္ဒရှင်များ မဲစာရွက်ပေါ်တွင် အမှန်မခြစ်ကြရတော့။ တံဆိပ်တုံး ထုကာ မဲပေးကြရပေတော့မည်။
မဲစာရင်း ကော်လံ ၃ ခုတွင် ရွေးကောက်ခံသူ အမည်၊.သူ ကိုယ်စားပြု သည့်ပါတီ နှင့် မဲပေးသူ တုံးနှိပ်ရမည့် အကွက် ဟူ၍ ထားရှိရာ သတင်းအဆိုအရ ကြိုက်သည့် အကွက်တွင် နှိပ်နိူင်သည်။
ဒါတွေ အသေးစိတ် ရေးမပြတော့။ အားလုံးသ်ိပြီးသား ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် အကြီးအကျယ် မိမိစိုးရိမ်မိသည့် အချက်ကို တခွန်းတလေမျ ဖေါ်ပြသွားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ယင်းသည်က တံဆိပ်တုန်းကို ပြောင်းပြန်နှိပ်မိက ပယ်မဲ ဖြစ်မည်လား ဆိုသည့် ကိစ္စပင်။ တံဆိပ်တုံး အတည့် နှိပ်နိူင်ဘို့အရေး အတွေ့အကြုံ ရှိသူများပင် မနည်း သတိထားဆောင်ရွက်ရသည်ကို သိကြမည်သာ။
နိူင်ငံတကာ စနစ်က အမှား အမှန် ခြစ်၊ အပေါက်ဖေါက်( punch card) စသည့် စနစ်များ သုံးကြပေရာ က္ဈန်တော်တို့ အဖို့က အတော်ကို ထူးဆန်းလှပေသည်။
ယင်းသည်က ဗိုလ်တင်အေး၏ နောက်ဆုံးဝှက်ဖဲ တချပ် ဖြစ်ပေမည်။
နောက်တချက်က နိူင်ငံတ၀ှမ်းရှိ လေးသောင်း ခုနှစ်ထောင်ရှိသော မဲရုံများအတွက် တံဆိပ်တုံးများ အလုံအလောက် ရှိဘို့ ငွေကြေးများ ရင်းနှီးမြှုပ်နံရပေ အုန်းမည်။
လောလောဆယ် အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘတ်ဂျက်ကို ဒေါ်လာ ၁၃၆,၀၀၀ လျာထားခဲ့ရာ နိူင်ငံတကာမှ က္ဈမ်းကျင်သူများရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ဆိုက အနည်ဆုံး ဒေါ်လာ ၂ သန်းလောက်မှ ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သို့ဆိုက ဗိုလ်တင်အေး အဘယ်အတွက်ကြောင့် ငွေကုန်ကျေးကြ ထပ်များရမည့် ကိစ္စကို အဘယ့်ကြောင့်မျာ့း ကြံရပြန်ပေသနည်း။
ရှင်းပါသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ ၇၀% သော မဲဆန္ဒရှင်များသည် လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေသူ များ ဖြစ်၍ တံဆိပ်တုံး ကို ကိုင်တွယ်ဘူးသူများ မဟုတ်ကြပေ။
အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်၍ အငြင်းအခုံဖြစ်ကြကာ ပယ်မဲများ တောင်လိုရာလို ပုံကြပေတော့မည်။
ဤကဲ့သို့ လူကြိုက်မများသော ဗိုလ်တင်အေးကို ညစ်နည်းပေါင်းစုံ သုံး၍ ညစ်ခိုင်းကာ နောက်ဆုံးတွင် မြစ်ဆုံ၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး အရေးလို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားကာ အနီးကပ်မှ နာမည်ကောင်း ယူကြပေအုန်းမည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ လူထု အနေဖြင့် ဤတံဆိပ်တုံးကိစ္စကိုကား အလေးအနက်ထား၍ စဉ်းစားသင့်သည်။
၎င်းတို့အဖို့ကား အာဏာရဘို့ဆိုလျင် ၈၈ ကဲ့သို့ တိုင်းပြည်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းကာ အစက ပြန်စဘို့လည်း ၀န်လေးမည့်သူများ မဟုတ်ကြ။
မိမိတို့ ပြည်သူများအနေဖြင့် ထိုအရေးကို ကာကွယ်ကြဘို့သာရှိသည်။
စိတ် ကို မနဲ ချုပ် ထားရ တယ်။
မဆဲ ဖြစ် အောင် ပါးစပ် ပိတ်ထားရတယ်။
ဒါ တကဲ့ ညစ်ပွဲကြီး စစ်စစ် နဲ့ နောက် မျက်လှည့်ပြ ကွက် တစ်ကွက် ဘဲ။
ဒီလောက် အသက် ကြီးကောင် ကြီးမား တွေ နဲ့ အာဏာ ရူး လွန်းနေတာ မရှက်ကြဘူး။
စိတ်ပုတ် စိတ်ယုတ် စိတ်အောက်တန်းကျ တဲ့ ဦးဏှောက် မဲ့ ဉာဏ်တုံး နည်း တွေ ထွက်ထွက် လာတာ ပြည်သူ တွေ ကို စော်ကား နေတာဘဲ။
အင်မတန် နည်းပညာတိုးတက် တဲ့ အနောက်တိုင်း တွေ မှာလဲ ဒီ အတိုင်း ဘောပင် အမဲ သုံး ပြီး လက် နဲ့ ခြစ် ရတာဘဲ။
တံဆိပ်တုံးထု တာ သေသေ သပ်သပ် ဖြစ်ဖို့ လွယ်တဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး။
မှင်မညီ ရင် မပေါ်လို့ ထပ်ထု မိ ရင် အဲဒါပယ်မဲ ဖြစ်မယ်။
ဇောက်ထိုး ထု ဖြစ်ဖို့ % တော်တော်များ မယ်။
မှင်ကုန် ရင် ဘယ်လို လုပ် ရမယ် ဘယ်လို သိမလဲ။
ဒါ လူ တွေ ကို သူတို့ ထင်သလို စော်ကား နေတော့ တာ။
အလွယ်လေး ပြီး နိုင်တာ ကို တံဆိပ်တုံး နဲ့ မှင် စရိတ် မတရား ပိုက်ဆံကုန် ရဦးမယ်။
ဒီ အတိုင်း ဘဲ ကြည့် နေဖို့ မကောင်းတော့ဘူး။
လူညီ ဖို့ တော့ အတော်လေး လို လာပြီ။
အရေးထဲ ဒီ လို ကြောင်ပွ ကြီး တွေ ကလဲ တစ်မှောက်။
သူတို့ အဘ တွေ အရူးချီးပန်း က ပြ နေတာ တွေ ကို တော့ မပြောရဲဘူး။
ထစ်ကနဲ ဆို မလို တာ ကို နှမ်းဖြူး ဖို့ ဘဲ လုပ်နေတယ်။
ဒီလောက်တောင် ဖြစ်နေလဲ ဟယ်။
အခု လက်ရှိ ပွဲ ထဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထုတ်လိုက်။
ကျန်သူ တွေ နဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ကို ပြန်သုံးသပ်။
အဲဒီလို ဆို ဘယ်လို အခြေ ဖြစ်မယ်ပြော။
ဒါ အတည်ပြောတာ နော်။
လက်ခံ နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ကို သုံးသပ် ပြ နိုင်ရင် နိကို ကျုပ် ပြောထားသမျှ တွေ အတွက် တောင်းပန် မယ်။
တီတီလော်ဗီမြ မေးခွမ်း ဖြေရရင်.. ခုချိန်ဆို ဒီမိုကရေစီရလို့ စစ်တပ်တောင် အာဏှာပျံသိမ်းတော့ မလှားဗဲ။ အဲလောက် အဲလောက် မြန်မှာ…။
မြွေမြွေခြင်း ခြေမြင်တဲ့ အနေအထားမှာ… ခေတ်ပြောင်းဖို့ မျှော်လင့်နေသလား..။ ဒါနဲ့ပဲ နောက်ထပ်တခါ သော့ ကျလိပ်အူးမြည်း။ တင်းခဲ့ပီးဗီ.. လျှော့ ခဲ့ပီးဘီ.. သူတို့ နောက်ဆုံး ခံစစ် စည်းကြောင်းကို သိနေရပြီ။ စစ်တပ်ဖက်ကတော့ သူတို့အပေါ် ဓါးမိုးမထားသ၍ လျှော့ရကောင်းမှန်း သိမည်မဟုတ်… ကိုယ်ကလည်း မမိုးနိုင်.. သဘုံဆိုဒါကလည်း သိတဲ့အတိုင်း.. တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုပဲ မျှော်စရာကြံသည်။။ ဖွဟဲ့ ထိပါစေ မှန်ပါစေ..။ အဲထှာတွေ ဆိတ်ကူးယဉ် စံလွမ်း ရင်တော့ကိုယ့်ဖက်က သူတို့ မလိုက်နိုင်တဲ့ ဗျူဟာအသစ် ခင်းကြ… အဲဒါကလည်း လာဘ်ရှိ အတိုက်အခံနဲ့ ဒီထက်ပို ထွက်မလာဒေါ့။ လူမွေးယုန်နဲ့ မရ.. လူသစ် ကိုယ့်နေရာ ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးမှ ရမည်။
ဘယ်ဘက် က ပိုအားသာသွားမလဲ ဆိုတာ မည်သူမှ မသိနိုင်တာ အမှန်ပါဘဲ